कोरियनहरुको औषत आयु ८० बर्षभन्दा माथि, आखिर किन धेरै बाँच्छन कोरियन? – Eps Sathi
December 1, 2021 1212
दक्षिण कोरियाली नागरिकहरुको औषत उमेर बढेको छ। गत बर्ष कोरियामा जन्मेका कोरियन बच्चाहरु औषतमा ८३.५ बर्ष बाँच्ने अनुमान गरिएको छ। कोरियन नागरिकहरुको हालको औषत आयु एक दशक अघिको भन्दा करिब ७ बर्षभन्दा बढिले बढेको पाइएको छ। बुधवार प्रकाशित एक तथ्याङ्कका अनुसार कोरियामा स्वास्थ सम्बन्धि सर्वसाधारणको ज्ञानमा भएको बृध्दि तथा स्वास्थ सेवाका क्षेत्रमा कोरियाले गरेको प्रगतिका कारण औषत आयु बढेको बताइएको छ।
कोरियाको तथ्याङ्क विभागका अनुसार सन २०२० मा जन्मिएका बच्चाहरुको औषत आयु अघिल्लो बर्ष जन्मेकाहरुको भन्दा २.४ महिना बढि हुने तथ्याङ्कमा देखिएको छ। करिब १० या २० बर्षअघिको तथ्याङ्कसँग तुलना गर्ने हो भने कोरियनहरुको औषत आयु करिब ३.२ र ७.५ बर्षले बढेको पाइएको छ।
दक्षिण कोरियाले सन १९७० देखि आफ्ना नागरिकहरुको औषत आयु सम्बन्धि रेकर्ड राख्न सुरु गरेको थियो। सन १९७० मा दक्षिण कोरियाली नागरिकहरुको औषत आयु ६२.३ बर्ष मात्रै रहेको थियो। अहिले पहिलो पटक कोरियाली नागरिकहरुको औषत आयु ८० बर्षभन्दा माथि पुगेको हो।
सन २०२० मा जन्मेका बच्चामध्ये केटाको ‍औषत आयु ८०.५ बर्ष हुने तथा केटीको औषत आयु ८६.५ बर्ष हुने आँकडाले बताएको छ। लिङ्गका आधारमा हेर्दा कोरियामा केटामान्छेभन्दा केटीमान्छे बढि बाँच्ने गरेको देखिएको छ। यिनिहरु बिचको औषत आयुको फरक गत ६ बर्षयता उस्तै रहेको छ।
अर्गानाइजेशन फर इकोनोमिक कोअपरेशन एण्ड डेभलपमेन्ट (ओइसिडी) का ३८ वटा देशहरुको औषत भन्दा दक्षिण कोरियामा पुरुषको औषत आयु २.६ बर्ष बढि र महिलाको औषत आयु ३.३ बर्षले बढि रहेको छ। ओइसिडी मुलुकहरुमध्ये दक्षिण कोरियाली नागरिकहरुको औषत आयु दोश्रो धेरै हो। कोरियाभन्दा अगाडी जापानीहरुको औषत आयु सबैभन्दा धेरै रहेको छ। जापानी नागरिकहरुको औषत आयु ८४.७ बर्ष रहेको छ। सन २०१९ भन्दा सन २०२० मा दक्षिण कोरिया ३ तह माथि आउँदै यो रैङ्किङमा दोश्रो भएको हो।
Prevकोरियामा एक स्कुल पढ्ने के’टीलाई रे’प गरेको आरोपमा नेपाली र बंगाली सहित ६९ जना कलेज बिध्यर्थी प’क्राउ
Nextहाइपर फण्ड डुबेको हल्ला चल्दै, खासमा भएको के हो? जानौं
चीनले आफ्नो खाना भएको दाबी गरेपछि कोरियाले निकाल्यो खिम्ची सम्बन्धि किताब